Yemukati kuburitsa paOracle taura nezve "tsika yekutya" | Linux Vakapindwa muropa
Kusvikira nguva yadarika, hombe tech yaive nemuchina wakanaka kwazvo. Vakataura nezve mamirioni avakagadzira, nharaunda huru yebasa ine yakavhurika jusi bhawa nematafura emitambo, uye kuti zvigadzirwa zvavo zvaizoita sei kuti nyika ive nzvimbo iri nani.
Zvinhu zvakatanga kushanduka (ndopakatanga tekinoroji hombe kukwikwidzana neyemagariro midhiya yekushambadzira mari uye vaverengi / vanoona zvinongoitikawo). Kuwedzera uye kwakawanda kwezviitiko zvevanogovana kana vakabiridzira vatengi, kutyorwa kwepachivande, kushungurudzwa pabasa uye yakareba etcetera.
Semuenzaniso, iyo Bhizinesi Insi portalder inouya ichitsikisa akateedzana ezvinyorwa zvine ruzivo rwemukati nezve Oracle. Ivo vanotaura nezve izvo vamwe vashandi vakadaidza "tsika yekutya" mukati mekambani. Oracle Cloud Kugadziriswa, iro basa rekupatsanura.
1 Kuteedzera iyo Amazon modhi
2 Zvinorehwa naOracle Zvemukati Zvichibuda Zvinotii Nezve "Tsika Yekutya"
Kuteedzera iyo Amazon modhi
Larry Ellison, CEO weOracle, haana kutenda mugore. Asi, sevatengi vake, aifanira kuchinjika. Pakutanga akaedza izvi nekutenga chechitatu-bato chigadzirwa icho chisina kukodzera izvo zvinodikanwa nevatengi veOracle vatengi. Yaive saizvozvo iyo yechipiri kuyedza cvakapfuurira mukutora mainjiniya kubva kumutungamiriri wemusika, Amazon.
Vakasarudzwa vaive, pakati pevamwe, Don Johnson (aizova mutungamiri wekutanga weprojekiti) uye Clay Magouyrk uyo angajoinha Oracle semunhu akazvipira uye anopedzisira achitsiva Johnson semutungamiri weboka idzva.
Iwe haugone kuramba izvo Clay Magouyrk akabudirira. Oracle Cloud Infrastructure ikozvino ine zviuru gumi zvevashandi uye, sekureva kwemukati masosi, inounza mari ye $ 10.000 bhiriyoni pagore. LRuzivo rwepamutemo rwakaburitswa munaKurume inoratidza kuti Oracle yakatumira $ 10.100 bhiriyoni mumari mukota ichangopfuura. Pakati pegore rayo kupatsanura, rakachengetedza kuti rakakura zana muzana zvichienzaniswa nenguva yakafanana ya100.
Zvinoenderana nezvakapihwa uye zvinyorwa izvo Business Insider yaive nekuwana, Oracle Cloud Zvivakwa iri kuteedzera tsika dzekambani dzeAmazon Web Services uye inotoronga mashopu nevatungamiriri vari kunze kwekambani kuti vaparadzire.
Mienzaniso inosanganisira kushandurwa kweAmazon "vatengi kugadzirisa" musimboti mu "kuisa vatengi pakutanga." Muitiro wekuva nechetatu une izwi rekupedzisira mukuhaya mushandi mutsva wakateedzerwawo. Iye wechitatu bato ndiye anoona kana iye anenge achinyorera ari kuita basa iri.
Asi, zvinoita sekunge kune makore kumusoro (Ivo vanofanirwa kunge vachindiziva ini uye voziva kuti ini handisi kuzomira kuita iyo jee).
Zvinorehwa naOracle Zvemukati Zvichibuda Zvinotii Nezve "Tsika Yekutya"
Zvinoitika kuti shamwari Magouyrk yakataurwa mumatare mashoma akamhan'arwa neaimbova vatevedzeri vemutungamiri kukambani. Mune mumwe wavo anoudzwa kuti akamboudza mukuru mukuru kuti zviito zvake zvainge "zvichipenga benzi" pamberi pevatungamiriri vepamusoro veOCI. Mumwe wevanyunyuti akazviuraya muna Kubvumbi.
Nguva dzose zvinoenderana neBusiness Insider zvinyorwa, lIzvo zvinodiwa zvinowira pasi pane izvo chaizvo zvinoitika. Sezvineiwo paanotsamwa, Magouyrk anotuka vanhu pachezvake nehunyanzvi pamberi pevamwe vake uye anotomboita kuti varume vakuru vacheme.
Chinhu chimwe chinofanira kutaurwa mukufarira. Panogona kuve ne "tsika yekutya" seizvo mumwe wevashandi akazviisa. Asi, zvirinani ivo vanonyevera. TO Mumwe munyoreri akayambirwa kuti anga achizoda "shamwari inotya" kutendeukira kwaari apo iye zvaifungidzirwa kuti achadzingwa.
Mimwe miitiro inodzokororwa inosanganisira kufambisa iyo yakazvidzwa kumapurojekiti madiki kana kumisikidza misi isingaite.
Rangarira iyo "Isa vatengi kutanga" chinhu?
IOCI yakatanga chirongwa chinonzi FairShare icho chinotsanangurwa nekambani sewen "muganho wekudzivirira vatengi kubva kune zvakawandisa basa". Pane zvinopesana, makuhwa ayo anotaura neBI anoti Oracle anga anyatso kupa vamwe vatengi zvakadzama kuchinjisa mukutsinhana kweakanaka ekushambadzira zvipupuriro kana mamwe masevhisi, ayo aanozvidemba iye zvino.
Kana ivo vatengi vachiedza kutora zvishandiso zvitsva uye zvichimhanya mune Oracle gore, ivo dzimwe nguva vanowana "kugona kukanganisa" meseji. Izvi zvinobvumira mumwe mutengi kubhadhara mutengo wakazara kuti ashandise zviwanikwa,
Ehezve, kuongorora kwechokwadi kweaya mazwi ese kuri kupfuura kugona kwangu seLinux Vakapindwa muropa. Zvinotozivikanwa kuti kudonha kwerudzi urwu kunogona kuve chikamu chemakwikwi pakati pemakambani. Pasina kupokana, ini ndichave ndiri mukutungamira kwekutsikisa kwakakodzera kuramba kana kwavo kunyepa kuchinge kwaratidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Yemukati kuburitsa paOracle taura nezve "tsika yekutya"
mushandisi asina kugutsikana akadaro
Ndakaverenga chinyorwa kaviri, nekuti "kudonha" kwakadaro kuri kurova, asi nesatra yezvikanganiso zvegirama ndinofanira kubvunza chokwadi chechinyorwa chakataurwa. Imwe yaizokwana, asi ndakaverenga 4… ZVINA!
Pindura munhu asingafare mushandisi
RAE inoti iro izwi haripo.
Uye, pane icho chinongedzo kune yekutanga sosi.
Apple neChina hurumende. The New York Times inopomera kubatana kwavo